Ihe kpatara nkwukọrịta otu ji dị mkpa karịa nchịkọta Martech gị | Martech Zone
Ihe kpatara nkwukọrịta otu ji dị mkpa karịa nchịkọta Martech gị
Ihe ngosi anakpo Simo Ahava banyere ogo data na ihe nkwukọrịta mere ka ọnụnọ ezumike niile dị na ya Gaa nchịkọta! ogbako. OWOX, onye ndu MarTech na mpaghara CIS, nabatara ọtụtụ puku ndị ọkachamara na nzukọ a iji kesaa ihe ọmụma na echiche ha.
Otu OWOX BI Ọ ga-amasị gị ka ị chee echiche nke Simo Ahava chọrọ, nke nwere ikike ime ka azụmahịa gị too.
Ogo nke data na ogo nke nzukọ
Ogo data dabere na onye na-enyocha ya. Dị ka ọ na-adị, anyị ga-ata ụta maka ntụpọ niile dị na data na ngwaọrụ, usoro ọrụ na datasets. Ma nke ahụ ọ̀ bụ ihe ezi uche dị na ya?
N'ikwu eziokwu, a na-ejikọta ogo data na otu anyị si ekwurịta okwu n'etiti nzukọ anyị. Ogo nke nzukọ ahụ na-ekpebi ihe niile, na-amalite site na ịbịaru data ntinye, atụmatụ, na mmụba, na-aga n'ihu na nhazi, na-ejedebe ogo nke ngwaahịa na mkpebi.
Ndị ụlọ ọrụ na usoro nkwukọrịta ha
Ka anyị were ụlọ ọrụ dị iche iche na otu ngwa ọrụ. Ndị nọ na ụlọ ọrụ a dị mma n'ịchọta ụfọdụ nsogbu ma dozie ha maka mpaghara B2B. Ihe niile dị mma, na enweghị mgbagha ị maara ụlọ ọrụ di na nwunye dịka nke a.
Mmetụta nke ọrụ ụlọ ọrụ ndị a na-ezo n'ime usoro ogologo oge iji bulie ihe achọrọ maka ogo data. N'otu oge ahụ, anyị kwesịrị icheta na ngwaọrụ ndị emere iji nyochaa naanị ọrụ data na data naanị ma bụrụ ndị dịpụrụ adịpụ na nsogbu azụmaahịa - ọbụlagodi na emepụtara ha iji dozie ha.
Ọ bụ ya mere ụdị ụlọ ọrụ ọzọ apụtala. Ndị ụlọ ọrụ ndị a bụ ọkachamara na nbugharị arụmọrụ. Ha nwere ike ịchọta ọtụtụ nsogbu na usoro azụmaahịa, tinye ha na bọọdụ ọcha, ma gwa ndị isi ụlọ ọrụ ahụ:
Lee, lee, ma ebe ahụ! Tinye usoro azụmaahịa ọhụrụ a ma ị ga-adị mma!
Mana ọ dị mma nke ukwuu ịbụ eziokwu. Efficiencyrụ ọrụ nke ndụmọdụ na-adabereghị na nghọta nke ngwá ọrụ na-enweghị obi abụọ. Ndị ụlọ ọrụ ndị ahụ anaghị ajụ ịghọta ihe kpatara nsogbu ndị ahụ ji pụta, ihe kpatara ụbọchị ọhụụ ọ bụla na-eweta mgbagwoju anya na njehie ọhụrụ, yana ngwaọrụ ndị edoziri ezighi ezi.
Yabụ uru nke ụlọ ọrụ ndị a n'onwe ha nwere oke.
E nwere ụlọ ọrụ nwere ma azụmaahịa azụmaahịa na ihe ọmụma banyere ngwa ọrụ. N’ụlọ ọrụ ndị a, mmadụ niile nwere nsogbu site n’inweta ndị nwere nnukwu agwa, ndị ọkachamara doro anya na nka na amamịghe ha. Jụụ. Mana, ụlọ ọrụ ndị a abụghị iji dozie nsogbu nkwukọrịta n'ime otu, nke ha na-ahụkarị dị ka ihe na-adịghị mkpa. Yabụ ka nsogbu ọhụụ pụtara, ịchụ nta amoosu bidoro - onye kpatara ya? Eleghị anya ndị ọkachamara BI ghagburu usoro a? Mba, ndị mmemme agụghị nkọwapụta ọrụaka. Mana na ihe niile, ezigbo nsogbu bụ na otu a enweghị ike ichebara nsogbu ahụ echiche nke ọma iji dozie ya ọnụ.
Nke a na-egosi anyị na ọbụlagodi na ụlọ ọrụ juputara na ndị ọkachamara dị jụụ, ihe niile ga-ewe ike karịa mkpa ọ bụrụ na nzukọ a abụghị tozuru okè ezu. Echiche bụ na ị ga-abụ okenye tokwa ọrụ, ọkachasị na nsogbu, bụ ihe ikpeazu mmadụ na-eche maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Ọbụna nwatakịrị m dị afọ abụọ nke na-aga ụlọ akwụkwọ ọta akara dị ka onye tozuru oke karịa ụfọdụ ụlọ ọrụ mụ na ha rụkọrọ ọrụ.
Nweghi ike ịmepụta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma naanị site na ị nweta ọtụtụ ndị ọkachamara, ebe ụfọdụ ndị otu ma ọ bụ ngalaba na-etinye uche ha niile. Ya mere njikwa na-aga n'ihu na-akpọ ndị ọkachamara n'ọrụ, mana ọ nweghị ihe gbanwere n'ihi na usoro na arụ ọrụ nke arụmọrụ anaghị agbanwe ma ọlị.
Ọ bụrụ n ’imeghị ihe ọ bụla iji mepụta ọwa nke nkwukọrịta n’ime na mpụga nke otu ndị a na ngalaba ahụ, mbọ niile ị na-eme agaghị enwe isi. Ọ bụ ya mere usoro nkwukọrịta na ntozu ntozu Ahava ji elekwasị anya.
Iwu Conway metụtara ụlọ ọrụ nchịkọta
Afọ iri ise gara aga, otu nnukwu onye mmemme aha ya bụ Melvin Conway tụrụ aro nke mechara bụrụ nke a maara dị ka iwu Conway:
Otu ndị na-ahazi nke ịhazi usoro. . . a na-amanye ya ịmepụta atụmatụ nke bụ mbipụta nke usoro nkwukọrịta nke ndị otu a.
Melvin Conway, Iwu Conway
Echiche ndị a pụtara n'oge otu kọmputa dabara n'otu ọnụ ụlọ zuru oke! Cheedị n'echiche: Lee, anyị nwere otu ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'otu kọmputa, ma n'ebe ahụ anyị nwere otu ọzọ na-arụ ọrụ na kọmputa ọzọ. Na ndụ n'ezie, iwu Conway pụtara na nkwupụta nkwukọrịta niile pụtara n'etiti ndị otu ahụ ga-adị ka usoro na mmemme nke mmemme ha mepụtara.
Ihe Onye Chetara:
A nwalere tiori a ọtụtụ narị ugboro na ụwa mmepe ma tụlere ya nke ukwuu. Ihe nkọwa doro anya nke iwu Conway bụ Pieter Hintjens, otu n'ime ndị mmemme kachasị nwee mmetụta na mmalite afọ 2000s, onye kwuru na "ọ bụrụ na ị nọ na nzukọ ihere, ị ga-eme sọftụwia sọftụwia." (Amdahl na Zipf: Iwu Iri nke Physics nke Ndị Mmadụ)
Ọ dị mfe ịhụ etu iwu a si arụ ọrụ na azụmaahịa na nyocha ụwa. N'ime ụwa a, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ buru ibu nke data anakọtara site na isi mmalite dị iche iche. Anyị niile nwere ike ikwenye na data n'onwe ya dị mma. Mana ọ bụrụ na inyocha data nke ọma, ị ga-ahụ ezughị oke niile nke nzukọ ndị nakọtara data ahụ:
Valueskpụrụ na-efu efu ebe ndị injinia na-ekwughi okwu
Formatsdị na-ezighi ezi ebe onye ọ bụla na-a attentionaghị ntị na onye ọ bụla tụlere ọnụ ọgụgụ nke ebe ntụpọ
Nkwukọrịta okwu na-egbu oge ebe onye ọ bụla amaghị usoro mbufe (ogbe ma ọ bụ iyi) yana onye ga-anata data ahụ
Ọ bụ ya mere sistemụ mgbanwe data ji ekpughere anyị ezughị oke kpamkpam.
Ogo data bu nchoputa nke ndi okacha-amara nke oru, ndi okacha-amara nke oru, ndi oru, na nkwurita okwu n’etiti ndi mmadu a.
Ructlọ ọrụ nkwurịta okwu kachasị mma na nke kachasị njọ maka ìgwè dị iche iche
Otu ndị ọrụ na-ahụkarị na MarTech ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha ahịa nwere ndị ọkachamara ọgụgụ isi azụmahịa (BI), ndị ọkà mmụta sayensị data, ndị na-emepụta ihe, ndị ahịa, ndị nyocha, na ndị mmemme (na njikọ ọ bụla).
Ma gịnị ga - eme n’ìgwè na - aghọtaghị mkpa nkwurịta okwu? Ka ahụ. Ndị mmemme a ga - ede koodu ogologo oge, na - agbasi mbọ ike, ebe akụkụ ọzọ ga - echere ka ha gafere baton ahụ. N’ikpeazụ, a ga-ewepụta beta, mmadụ niile ga na-atamu ntamu banyere ihe mere o jiri were ya ogologo oge. Ma mgbe ntụpọ mbụ pụtara, onye ọ bụla ga-amalite ịchọ onye ọzọ ịta ụta mana ọ bụghị ụzọ iji zere ọnọdụ mere ha ebe ahụ.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na nke ọma, anyị ga-ahụ na ebuteghị ebumnuche anyị n'ụzọ ziri ezi (ma ọ bụ ma ọlị). N'ọnọdụ dị otú a, anyị ga-enweta ngwaahịa mebiri emebi ma ọ bụ nke nwere ntụpọ.
Ihe kachasị njọ nke ọnọdụ a:
Enweghi oke itinye aka
Enweghi oke ikere òkè
Kedụ ka anyị ga - esi mezie ya? N'ụzọ nkịtị site n'ime ka ndị mmadụ kwuo okwu.
Ka anyị chịkọta mmadụ niile ọnụ, tọọ isiokwu nke mkparịta ụka, ma hazie nzukọ kwa izu: ịzụ ahịa na BI, ndị mmemme na ndị nrụpụta yana ndị ọkachamara data. Mgbe ahụ anyị ga-atụ anya na ndị mmadụ na-ekwu maka ọrụ ahụ. Mana nke ahụ ezughi n'ihi na ndị otu a anaghị ekwu maka ọrụ niile a, ha anaghịkwa agwa ndị otu ahụ okwu. Ọ dị mfe iji snow na-enwe ọtụtụ iri nzukọ na enweghị ụzọ ọpụpụ na enweghị oge iji rụọ ọrụ ahụ. Ozi ndị ahụ mgbe nzukọ gachara ga-egbu oge fọdụrụ na nghọta nke ihe ị ga-eme.
Ọ bụ ya mere nzukọ bụ naanị ihe mbụ ị ga-eme. Anyị ka nwere nsogbu ụfọdụ:
Mkparịta ụka na-adịghị mma
Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-anwa ịfefere ndị ọrụ ibe ha ozi dị mkpa gbasara ọrụ ahụ. Mana kama ozi gafere, igwe asịrị na-emere ha ihe niile. Mgbe ndi mmadu amaghi otu esi ekesara echiche ha na echiche ha nke oma na gburugburu ya, ozi ga efunari onye anata ya.
Ihe ndị a bụ ihe mgbaàmà nke ụlọ ọrụ na-enwe nsogbu nkwukọrịta. Ọ na-amalite iji nzukọ agwọ ha. Mana anyị nwere azịza ọzọ mgbe niile.
Duru onye obula ka o kwurita banyere oru a.
Ihe kachasị mma nke usoro a:
Ihe omuma na omuma
Nke a bụ usoro dị oke mgbagwoju anya nke siri ike ịmepụta. Nwere ike ịma usoro ole na ole na-ewe usoro a: Agile, Lean, Scrum. Ọ dịghị mkpa ihe ọbụla ị kpọrọ ya; ha niile na-wuru na "na-eme ihe niile ọnụ n'otu oge" ụkpụrụ. Kalenda ndị ahụ niile, ahịrị ọrụ, ngosi ngosi, yana nzukọ na-ebili ebumnuche na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere ọrụ a ugboro ugboro.
Ọ bụ ya mere Agile ji amasị m nke ukwuu, n'ihi na ọ gụnyere mkpa nke nkwukọrịta dị ka ihe dị mkpa maka ịdị ndụ oru ngo.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ na ị bụ onye nyocha nke na-enweghị mmasị na Agile, lee ya anya n'ụzọ ọzọ: Ọ na - enyere gị aka igosi nsonaazụ nke ọrụ gị - data gị niile, data ndị ahụ dị egwu, usoro data gị - iji mee ndị mmadụ nwee ekele maka mbọ gị. Mana iji mee nke ahụ, ị ​​ga-ahụ ndị ọrụ ibe gị ma gwa ha okwu na tebụl gburugburu.
Kedu ihe na-esote? Onye obula amalitela ikwu banyere oru ngo a. Ugbu a anyị nwere iji gosipụta ogo nke oru ngo. Iji mee nke a, ụlọ ọrụ na-ewerekarị onye ndụmọdụ nwere ọkwa ọkachamara kacha elu.
Isi njirimara nke ezigbo onye ndụmọdụ (enwere m ike ịgwa gị n'ihi na m bụ onye ndụmọdụ) na-ebelata itinye aka ya na ọrụ a.
Onye ndụmọdụ enweghị ike ịzụ ụlọ ọrụ obere ihe nzuzo nzuzo n'ihi na ọ gaghị eme ka ụlọ ọrụ ahụ tozuo oke ma na-akwado onwe ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị enweghị ike ịdị ndụ na-enweghị onye ndụmọdụ gị, ị kwesịrị ịtụle ogo ọrụ ị natara.
Site n'ụzọ, onye ndụmọdụ ekwesịghị ịme akụkọ ma ọ bụ bụrụ aka ọzọ maka gị. Have nwere ndị ọrụ ibe gị maka nke ahụ.
Ebumnuche bụ ị nweta onye ndụmọdụ bụ agụmakwụkwọ, idozi usoro yana usoro yana ikwalite nkwukọrịta. Ọrụ onye ndụmọdụ abụghị ịkọ akụkọ kwa ọnwa kama ọ na-etinye onwe ya n'ime ọrụ ahụ ma na-etinye aka na ọrụ ụbọchị niile nke otu.
A ọma onye na-ahụ maka ịre ahịa n'usoro juputara oghere na ihe omuma na nghota nke ndi oru ngo. Ma ọ gaghị enwe ike ịrụrụ mmadụ ọrụ ahụ. Otu ụbọchị, onye ọ bụla ga-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị onye ndụmọdụ.
Nsonaazụ nkwukọrịta dị mma bụ enweghị enweghị ịchụ nta amoosu na ịtinye aka. Tupu ọrụ amalite, ndị mmadụ na-akọrọ ndị otu ndị ọzọ obi abụọ na ajụjụ ha. Ya mere, a na-edozi ọtụtụ nsogbu tupu ọrụ amalite.
Ka anyị hụ otu ihe a niile si emetụta akụkụ dịkarịsịrị mgbagwoju anya nke ọrụ nyocha ahịa: ịkọwapụta data na-agakọ na ijikọ data.
Etu esi egosi nkwukọrịta Nkwukọrịta na Nyefe data na Nhazi?
Ka anyị were ya na anyị nwere isi mmalite atọ na-enye anyị data ndị a: data okporo ụzọ, data ngwaahịa e-commerce / data zụta site na usoro iguzosi ike n'ihe, na data nyocha mobile. Anyị ga-agafe usoro nhazi data otu otu, site na ị nweta data ahụ niile na Google Cloud iji zipu ihe niile maka ịlele na Google Data Studio site n'enyemaka nke Gugulu BigQuery.
Dabere na ihe atụ anyị, ajụjụ ndị dị a shouldaa ka ndị mmadụ kwesịrị ịjụ iji mee ka nkwukọrịta doro anya n'oge ọ bụla nke nhazi data?
Nchịkọta data nchịkọta. Ọ bụrụ na anyị echefu ịlele ihe dị mkpa, anyị enweghị ike ịlaghachi n'oge ma nyeghachi ya. Ihe ị ga-atụle tupu oge eruo:
Ọ bụrụ na anyị amaghị ihe anyị ga-akpọ oke na mgbanwe dị mkpa, kedu ka anyị ga - esi kwụsị nsogbu niile?
Kedu ka a ga-esi gosipụta ihe omume?
Kedu ihe ga-abụ ihe nchọpụta pụrụ iche maka usoro data ahọpụtara?
Kedu ka anyị ga-esi elekọta nchekwa na nzuzo?
Kedụ ka anyị ga-esi chịkọta data ebe enwere mmachi na nchịkọta data?
Jikota data na-asọba n’ime iyi ahụ. Tụlee ihe ndị a:
Ekpụrụ ETL ndị bụ isi: Ọ bụ ụdị ogbe data mbufe ma ọ bụ ụdị iyi?
Kedu ka anyị ga-esi akara njikọ nke iyi na ogbe nnyefe data?
Kedụ ka anyị ga-esi mezie ha n'otu atụmatụ data na-enweghị ọghọm na mmejọ?
Oge na usoro ọgụgụ oge: Olee otu anyị ga-esi enyocha timestamps?
Kedụ ka anyị nwere ike isi mara ma mmezi data na mejupụtara na-arụ ọrụ nke ọma n’ime timestamps?
Kedu ka anyị ga-esi gosipụta hits? Kedu ihe na - eme ọghọm na - enweghị isi?
Nchịkọta nchịkọta data. Ihe ị ga-atụle:
Pụrụ iche ntọala maka ETL Filiks: Gịnị ka anyị nwere na-abaghị uru data?
Patch ma ọ bụ hichapụ?
Anyị enwere ike irite uru na ya?
Kedu ka ọ ga-esi emetụta ogo nke data niile?
Firstkpụrụ mbụ maka ọkwa ndị a niile bụ na mmejọ ndị ahụ dakwasịrị ibe ha wee keta onwe ha. Nchịkọta anakọtara na ntụpọ na ọkwa mbụ ga-eme ka isi gị nwụọ ntakịrị n'oge usoro niile. Thekpụrụ nke abụọ bụ na ị ga-ahọrọ isi ihe maka mmesi obi ike data. Maka na oge nchịkọta, a ga - agwakọta data niile, ị gaghị enwe ike ịmetụta ogo data agwakọtara. Nke a dị ezigbo mkpa maka ọrụ mmụta igwe, ebe ogo data ga-emetụta ogo nsonaazụ igwe. Nsonaazụ dị mma enweghị ike ịnweta data dị ala.
Nke a bụ ọkwa CEO. O nwere ike ịbụ na ị nụla banyere ọnọdụ ahụ mgbe onye isi ọrụ lere nọmba na dashboard wee sị: “Ọ dị mma, anyị enwetala ọtụtụ uru afọ a, ọbụlagodi karịa na mbụ, mana kedu ihe kpatara usoro ego niile dị na mpaghara uhie ? ” N'oge a, ọ gafeela ịchọ maka mmejọ ahụ, dịka e kwesịrị ijide ha ogologo oge gara aga.
Ihe niile dabere na nkwukọrịta. Na na isiokwu nke mkparịta ụka. Nke a bụ ihe atụ nke ihe ekwesịrị ịtụle mgbe ị na-akwadebe Yandex gụgharia:
Ga - achọta azịza nye ọtụtụ ajụjụ ndị a naanị yana ndị otu gị. N'ihi na mgbe mmadụ mere mkpebi dabere na ịkọ nkọ ma ọ bụ echiche nke onwe ya na-anwaleghị echiche ahụ na ndị ọzọ, enwere ike ihie ụzọ.
Ihe mgbagwoju anya di ebe nile, obuna n’ebe di nfe.
Nke a bụ otu ihe atụ ọzọ: Mgbe ị na - enyocha akara nke kaadị ngwaahịa, onye nyocha na - achọpụta njehie. Na kụrụ data, niile echiche si niile ọkọlọtọ na ngwaahịa kaadị zitere ozugbo mgbe page loading. Mana anyị enweghị ike ijide n’aka ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ lere anya n’ihe niile dị na peeji ahụ. Onye nyocha ahụ na-abịakwute ìgwè ahụ iji gwa ha nke a n'ụzọ zuru ezu.
BI kwuru na anyị enweghị ike ịhapụ ọnọdụ dị otu a.
Kedu ka anyị ga-esi gbakọọ CPM ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ijide n'aka ma egosiri ngwaahịa ahụ? Kedu ihe bụ CTR ruru eru maka foto ahụ?
Ndị ahịa ahụ zara:
Lee, onye ọ bụla, anyị nwere ike ịmepụta akụkọ na-egosi CTR kachasị mma ma nyochaa ya megide ọkọlọtọ okike yiri ya ma ọ bụ foto na ebe ndị ọzọ.
Ma mgbe ahụ na mmepe ga-asị:
Ee, anyị nwere ike idozi nsogbu a site na enyemaka nke njikọ ọhụrụ anyị maka nsụgharị mpịakọta na nyocha visibiliti isiokwu.
N'ikpeazụ, ndị na-emepụta UI / UX na-ekwu, sị:
Ee! Anyị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ umengwụ ma ọ bụ ebighebi ebighi ebi ma ọ bụ pagination n'ikpeazụ!
Lee usoro ndị otu obere otu a gabigara:
Kọwaa nsogbu ahụ
Kwuputara nsonaazụ azụmahịa nke nsogbu ahụ
Tụọ mmetụta nke mgbanwe
Chọpụta uru na-adịchaghị mkpa
Iji dozie nsogbu a, ha kwesịrị ịlele nchịkọta data sitere na sistemụ niile. Ngwọta ele mmadụ anya n'ihu n'otu akụkụ nke atụmatụ data agaghị edozi nsogbu azụmaahịa ahụ.
Ọ bụ ya mere anyị ji arụkọ ọrụ ọnụ. A gha ichikota data nke oma kwa ubochi, ma o bu oru siri ike ime nke a. Na àgwà nke data ga-enweta site na iwere ndị ziri ezi, ịzụ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị, na itinye ego, oge, na mgbalị iji wuo usoro nkwukọrịta dị mma, nke dị mkpa maka ịga nke ọma nke nzukọ.
Tags: BigQuerynchịkọta datadata nyefeỊhụ ihu igwegoogle data studionkwukọrịta ahịaowox biYandexyoric metrica
Mariia bụ Business Development Executive na 6 + afọ nke ahụmahụ gụnyere ahịa na ngwaahịa management ndabere. OWOX BI na-etinye nchịkọta njedebe na njedebe na-akpaghị aka na-akwalite akụkọ na mkpọsa mgbasa ozi, nyocha ndị otu, ROPO, CPA, ROI, ROAS, LTV, САС, nwekọ na ndị ọzọ.
Ebumnuche 6 maka ịtọgharịa WordPress Blog